Kugadziriswa kweiyo nyowani iPhone kwaizotanga muna Gunyana 14 | IPhone nhau
Kugadziriswa kweiyo nyowani iPhone kwaizotanga muna Gunyana 14
Apple ichaunza gore idzva renji rePhones munaGunyana. Pangave neatatu iPhone ine dhizaini yeiyo iPhone X ya2017. Imwe "Plus", imwe iine LCD skrini uye imwe, kuvandudzwa kweazvino iPhone X.
Uyewo, isu tinoshuvira kuona nhau senge Apple Watch nhevedzano 4 (ine dhizaini nyowani inosanganisira skrini ine mashoma mafuremu), nhumbi yekutakura zvinhu (yatounzwa kare), Airpods isina waya yekuchaja, pamwe nedzimwe nhau dzeIOS 12 dzisati dzaburitswa uye dzinozouya neshanduro yekupedzisira yeiyo nyowani yekushandisa system.
Mumakore apfuura, mharidzo yacho yave iri, kungangoita pasina kusarudzika, mumavhiki ekutanga aGunyana. Kazhinji vhiki yechipiri pakati peMuvhuro neChitatu.
Iine idzi data patafura, Tinovimba kuve nehurukuro yepamutemo munaGunyana 10, Muvhuro, kana Gunyana 12, Chitatu. Kudzivisa Chipiri, Gunyana 11.
Kusiyana neWWDC, iyi mharidzo inotarisirwa kuitirwa paSteve Jobs Theatre, muApple Park muCupertino.
Asi kupa zvikonzero zvinowedzera zvemazuva aya, mutepfenyuro wechiGerman Macerkopf, inoratidza zuva rinogona kuitika rekuchengetedzwa kwePhones nyowani, neChishanu, Gunyana 14, 2018.
Musi weChishanu iwo matsva achatanga, kunyangwe isu tisingazive kana ichizosanganisira Spain kana kwete. Kana zvirizvo, zvishandiso zvakachengetwa munaGunyana 14 zvaizotanga kutumira svondo gare gare, neChishanu, Nyamavhuvhu 21.. Ichi Chishanu 21 ichave iri yepamutemo kuvhurwa musi wechigadzirwa uye kana kutengesa muzvitoro kwaizotanga.
Kunyangwe iwo mazuva anoita kunge ane musoro uye kuve bheji rakachengeteka, Apple haisati yatumira kokero kune vezvenhau uye hatina chibvumirano chepamutemo chezuva, nguva kana nzvimbo. Asi zvese zvinoratidza kuti musi waGunyana 12 tichava neKeynote, musi waGunyana 14 tichava neyekuchengetedzwa kwe iPhone uye munaGunyana 21 kuvhurwa kwayo kwepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Kugadziriswa kweiyo nyowani iPhone kwaizotanga muna Gunyana 14
Vashandisi vakati wandei vachiri kushandisa iyo yekare vhezheni yeTweetbot, vanozviita sei?
Koogeek Smart Light Strip, kuvheneka uye kushongedza kweKeKKit